Football Khabar » पहिलो हाफमा ब्राजिललाई अग्रता : दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाले कमब्याक गर्ला ?
पहिलो हाफमा ब्राजिललाई अग्रता : दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाले कमब्याक गर्ला ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा अहिले घरेलु टोली ब्राजिल र पाहुना टोली अर्जेन्टिना सेमिफाइनल खेलमा भिडिरहेका छन् । खेलको पहिलो हाफमा ब्राजिलले १–० को सुरुआती अग्रता लिएको छ । निकै घम्साघम्सीपूर्ण खेलमा ब्राजिलले खेलको १९औं मिनेटमा ग्याब्रिएल जेससको गोलबाट अग्रता लिएको हो । बक्सभित्र रोवर्ट फर्मिन्होले दिएको क्रस पासमा अनमार्क रहेका जेससले सहजै गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्जेन्टिनाले खेल बराबरी गर्ने एक सुनौलो मौका बनाएको थियो । करिब ३० यार्ड दूरीबाट कप्तान मेस्सीले हानेको फ्रि किकमा सर्जियो अगुएरोको हेडिङ बल बारमा लागेर फर्किंदा ब्राजिल गोल खानबाट मुस्किलले बचेको थियो । पहिलो हाफमा ब्राजिलले भन्दा बढी अर्जेन्टिनाले आक्रमण गरे पनि उसले गोल निकाल्न सकेन । खेलमा बल नियन्त्रण भने करिब बराबरी छ । पहलिो हाफमा पटक–पटक झडप र ठेलाठेलका दृश्य देखिए ।
प्रकाशित मिति १८ असार २०७६, बुधबार ०१:१६